Baahin: Sabti, Apr 09, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Galkacyo. Laascaanood: Qunbulad gacmeed lagu tuuray saldhig bilays; taliyihii ciidanka oo dhawaac soo gaaray; Maxamuud Jaamac oo ka mid ah shacabka Laascaanood ayaan waraysanay … Jibuuti: M/weyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar saddexaad la doortay; milicsi sooyaalka siyaasadeed ee M/weyne Geelle … Garowe: Warbixin ay noloshii Alle ha u naxariistee Ilkacase ka qortay hay?adda Interpeace … Xudun: Saamaynta abaaraha ee gobolka Sool oo heer khatar ah gaaray … – Radio Daljir
Baahin: Sabti, Apr 09, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Galkacyo. Laascaanood: Qunbulad gacmeed lagu tuuray saldhig bilays; taliyihii ciidanka oo dhawaac soo gaaray; Maxamuud Jaamac oo ka mid ah shacabka Laascaanood ayaan waraysanay … Jibuuti: M/weyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar saddexaad la doortay; milicsi sooyaalka siyaasadeed ee M/weyne Geelle … Garowe: Warbixin ay noloshii Alle ha u naxariistee Ilkacase ka qortay hay?adda Interpeace … Xudun: Saamaynta abaaraha ee gobolka Sool oo heer khatar ah gaaray …
Abriil 9, 2011 12:00 b 0
Garoowe: Xaalladda nololeed ee barakacayaasha.
Garoowe: Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay qaar ka mida fuliyayaashii weerarkii shalay.